श्रीमती नीलमको प्रश्न श्रीमान् रामकृष्णलाई - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
नढाँटी भन्नु त तपाईं मलाई कत्तिको माया गर्नुहुन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ नदिन मिल्छ कि मिल्दैन ? किनभने यो प्रश्नको जवाफ सोच्दा–सोच्दै दिन बित्ने भो ।
छोरी रानी र ममध्ये एक जनालाई विदेश भ्रमण लाने मौका पाउनुभयो भने कसलाई लानुहुन्छ ?
कस्तो गाह्रो प्रश्न सोधेको ? यसमा त कुनै अप्सन नै छैन किनभने काठमाडौंमा त तिमीले मलाई छोरीलाई मात्र लिएर हिँड्न दिन्नौ, अझ नेपाल बाहिर त छोरीलाई मात्र लिएर हिँड्ने सम्भावना नै रहँदैन । त्यसैले विदेश जाँदा कि त म एक्लै जान्छु, कि आमा–छोरीलाई नै लिएर जान्छु ।
तपाईंको म्युजिक भिडियोमा मैले अर्कै मोडलसँग अभिनय गर्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
सुरुमा त इष्र्या पनि लाग्यो तर पछि त्यो एउटा सेन्टिमेन्टल गीत भएकाले मन्चिनसँग तिम्रो जोडी सुहायो । तिमीहरू क्लासमेटसमेत भएकाले पनि अभिनय गर्ने क्रममा तिमीलाई असजिलो भए जस्तो लागेन । भिडियोको रिजल्ट पनि राम्रै आएकाले म खुसी छु ।
चलचित्रको अभिनेता बन्ने प्रस्ताव पाउनुभयो भने नायिकामा मेरो सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
त्यस्तो सम्भावना म निकै कम देख्छु किनभने तिमीलाई चलचित्रमा खासै रुचि छैन भन्ने मलाई थाहा छ । तिमीमा भिडियो तथा विज्ञापनमा काम गर्ने रहर छ, त्यसमा हो भने सँगै काम गर्ने सम्भावना प्रसस्त छ ।
मलाई कुनै आफ्नै गीत डेडिकेट गर्नुपर्‍यो भने ?
तिमी अलि रिजर्भ स्वभावकी छौ । त्यसैले ‘नजिक आउनुमा माया लाउनुमा किन हिच्किची, किन कन्जुसी...’ रोज्छु ।
अधिकांश कलाकार अमेरिका पलायन भैरहेका छन्, तपाईंमा पनि कुनै दिन त्यस्तो विचार आयो भने ?
त्यसको सम्भावना जिरो छ किनभने बस्ने भए हामी सन् २००३ मै अमेरिका बस्ने थियौं । हामी त्यतिबेला विवाह गर्ने बित्तिकै अमेरिका पुगेका थियौं । कन्सर्टका क्रममा अमेरिकामा रहँदा त मलाई कहिले नेपाल फर्किउँ जस्तो हुन्छ, म सधैंका लागि त त्यहाँ टिक्दै टिक्दिन । कम्तीमा यो जूनीमा चाहिँ सम्भव छैन ।
मैले पकाएको कुन परिकार तपाईंलाई असाध्यै मनपर्छ ?
तिमीलाई मीठो गरी पकाउन आउने भनेको खसीकै मासु त हो नि । तिमीले पकाए जस्तो खसीको मासु मैले आजसम्म अन्त कतै खान पाएको छैन ।